Home / Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana / Faucets fandroana indroa ho an'ny trano fandroana indroa / WOWOW Nandroana fandroana Nickel Fandroana Centerset
naoty 4.91 avy tany 5 mifototra amin'ny 35 mpanjifa naoty
(35 mpanjifa famerenana)
Ny potiam-pandro amin'ny trano fandroana dia misy vidiny ny vidiny. Ny vokatra avo lenta miaraka amin'ny lamaody ankehitriny. Vidio ny Nickel Fandroana baiko avelan'ny fonosana izao!
2321200 torolàlana fametrahana
Rivoak'akanjo fandroana no nivezivezy ny nikelika 2321200
Vonona ny hamolavola na hanaingoana ny efitra fandroana ve ianao? Amin'ny WOWOW dia mino izahay fa ny famolavolana na ny famolavolana ny trano fandroana dia tsy maintsy atao miaraka amin'ny fitaovana tsara indrindra ho an'ny fampisehoana tsara indrindra. Ary na izany aza, dia tokony hividianana na iza na iza. Ny haingoana na ny famerenany ny efitra fandroana matetika dia tsy zavatra mora vidy. Ary noho ny antony-teti-bola na olana tsy nahitam-bokany dia mety hikaroka faucets mora ny olona rehefa lany vola izy ireo. Amin'ny WOWOW isika dia mahatakatra an'izany, ary noho izany dia azoko atao ny mividy mividy poleta ambony indrindra amin'ny vidiny mora. Tsy mampino ve izany? Tsy hoe rehefa mamaky momba anay sy ireo vokatrao izahay.
WOWOW dia marika vaovao somary vaovao, mamokatra vinavina be toa ny faucets. Mba hampifanaraka ny karazan-doko sy fomba fananganana rehetra, ny WOWOW dia nanolotra safidy marika feno kalitao hatrany mba mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifanay rehetra. Ary araky ny hitanao ao amin'ny portfolio-n'ny WOWOW, dia nanakarama ny mpanaingo indrindra izahay hanolotra anao kojakoja ho an'ny efitra fandroana izay mety amin'ny gazety famolavolana. Mino izahay fa ny WOWOW dia manolotra anao ny taha tsara indrindra amin'ny elanelam-bidy indrindra amin'ny tsena miaraka amin'ireo faucets famaritana avo indrindra, vokatra avo lenta ary misy amin'ny vidiny mora.
Rivo-boankazo fandroana maoderina
Ity fako amin'ny efitra fandroana an-jery mahazatra sy ankehitriny ity dia manana fehin-kibo an'ny WOWOW dia misy ny fametrahana rano roa, ny iray ho an'ny rano mafana ary ny iray ho an'ny rano mangatsiaka. Ity famoronana retro ity dia manazava ny efitra fandroana misy rihana manokana. Araka ny fantatrao, ny goavam-baravarankely dia teboka voajanahary, na dia ireo trano fandroana kely indrindra aza. Noho izany antony izany dia afaka manome fihodinana retro manokana amin'ny efitra fandroanao ianao, ary tsy mampandefitra ny fampiasa sy ny kalitao. Io nosy fandroana voamadika mafana dia mora ny mampifangaro amin'ny gny fandroana hafa an'ny WOWOW izay azo ampiasaina amin'ny endrika mitovy ary mifarana toa io fandroana voasana fandroana io.
Ny fehin-tsolika vita amin'ny nickel dia vita amin'ny palaka nela-bita izay efa vita tamin'ny fanodinana azy amin'ny borosy tariby. Izany indrindra no antony nahatonga ny fivoahana fandroana namboarina tao anaty efitra fandroana nahazo ny endriny vita. Ity fehin-tsolika nifangaro ity dia manome fefy mafana sy miavaka ity fandroana ity. Ankoatr'izay dia mamorona fijery tokana miaraka amin'ny fahasamihafan'ny hazavana sy ny alokaloka hita eny amin'ny velaran'ity gropy fandroana ity. Noho ny toetra mampiavaka azy dia ny nosy palitao an'ny trano fandroana WOWOW dia tsy ho ao amin'ny toerany any amin'ny hotely dimy kintana na an'ny trano manokana.
Nosoka ny palitao voalohany tao anaty efitra fandroana voalohany
Tsikaritrareo avy hatrany ny kalitaon'ity gropy fandroana ity rehefa anananao eny an-tananao. Tsy misy mahasosotra azy fa tsy ny nametraka tafiotra vaovao fandroana nanomboka ny nidina taorian'ny fotoana fohy. Ity feo mampirotsaka anao ity dia mety hahatonga anao ho adala, indrindra amin'ny alina. Avy eo matetika dia tsy misy vahaolana hafa noho ny fanoloana ny gny fandroana ho anao. Mety ho lafo be ilay izy, ary ny fivarotana trano fandroana mora vidy dia tsy mora izany amin'ny farany. Amin'ny WOWOW ianao dia mianatra amin'ny lafiny iray fa ny vokatra avo lenta dia tsy voatery hidika ho vidiny lafo be ihany koa. Ny WOWOW dia manaporofo fa afaka manana kalitao ambony amin'ny vidiny mora ianao. Ity fantsom-pokonolo fandroana ity dia manome ny varahina be dia be, akorandriaka matevina ary fananganana maharitra. Ny faharetana no tanjona voalohany rehefa natao ny fandroana namboarina tao anaty efitra fandroana an'ny WOWOW. Ary izany no ho hitanao avy hatrany.
Ny vatan'ny paosy WOWOW fandroana namboarina dia vita amin'ny varahina. Ity joro fandroana namboarina tanana ity dia tsy natao ho an'ny cUPC- ary voamarina NSF 61. Ny palitao ao anaty efitrano fandroana dia nivezivezy amin'ny nickel an'ny WOWOW dia manasongadina renirano splashfree maharitra. Ho fanampin'izany, tsy ho hitanao ny fanontana manondro rantsan-tanan'ny fandroana fandroana. Mora ny manadio ary mora ampiasaina foana. Amin'izany fomba izany dia hanana kiraro fandroana namboarina mamirapiratra ianao mandritra ny fotoana maharitra.
Nasiaka fotsim-bidy namboarina ho an'ny efitra fandroana mahomby
Nikelina ny palitao an'ny efitrano fandroana WOWOW dia vita tamin'ny fivoaran'ny haitao ara-javakanto mba hanomezana fahafinaretana sy fiaretana ho anao. Ary izany rehetra izany amin'ny vidiny mora. Ambonin'ny zava-drehetra, ny ABS-aerator dia mamonjy rano 50% ho anao, ka ho hitanao izany amin'ny volanao koa. Ny WOWOW dia manampy anao hamonjy amin'ny fomba maro.
Ankoatry ny vidiny manintona sy ny toetoetran'ny rano, ity jaky fandroana voasana ity dia mora apetraka ihany koa. Ity fandroana efitrano fantsom-pamatrana 4-inch ity dia azo apetraka amin'ny kitapo fandroana an-tsokosoko 3-hole. Ity fehin-trano fandroana namboarina amin'ny laoniny voakaly ity dia misy ihany koa ny sakanana pop up. Ny fametrahana fitaovana rehetra dia tonga miaraka amin'ny faucet. Ity fehin-kibo fandroana ito dia afaka apetraka miaraka amin'ny torolàlana mazava fametrahana. Na tsy matihanina aza ianao. Amin'ity fomba ity dia afaka mitahiry vola ihany ianao.
Ny fandefasana maimaim-poana sy ny valin'ny vola 90 andro
Raha ny WOWOW mijoro amin'ny vokatra ary resy lahatra momba ny kalitaon'ny faucets dia omena ny fivoahana mandritra ny 3 taona miaraka amin'ny fandroana feno fandroana. Raha toa ka tsy tanterahina araka ny efa nampanantenaina ny faucet fandroana namboarina an'ny WOWOW, dia hahazo marika vaovao fandroana vaovao ianao, tsy misy olana.
Ankoatr'izay, WOWOW dia manome anao antoka famerenam-bola 90 andro. Rehefa mieritreritra ianao fa tsy nanolotra anao ny zavatra nomenay dia azonao atao ny mandefa ny banga fandroana any aminay tsy misy fanontaniana. WOWOW dia ny fitazonana ny fampanantenany, ary raha tsy manana izany fahatsapana izany ianao, dia handray ny andraikitsika amin'izany. Raha vantany vao miverina amin'ny nickel avy amin'ny fandroana namboarina ny renirano namboarina dia ho tonga avy hatrany ianao ny volanao!
Toy ny vokatra WOWOW rehetra, ity nickel palitao feno lafaoro ity dia ho maimaim-poana amin'ny toerana rehetra eto amin'izao tontolo izao. WOWOW dia manana mpihaino be dia be manerantany ary mankasitraka ny rehetra ny vidiny lafo vidy WOWOW. Tianay anao ny manandrana ny vokatrao koa. Ary fantatray fa tsy haniry hanova amin'ny faucets hafa intsony ianao.
Ny tombony azo avy amin'ny fandroana fandroana nanapoaka Nickel amin'ny fomba fohy:
 Famolavolana mahazatra sy ankehitriny
 Nodimandry vita amin'ny tanana vita amin'ny tanana
 faucet fandroana mahery vaika
 vita amin'ny kalitao avo lenta
SKU: 2321200 Sokajy: Faucets fandroana indroa ho an'ny trano fandroana indroa, Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana Tags: 4 santimetatra, Nickel nopotehina, Fehilasy mitokana
9 X 2.2 X 5.1 santimetatra
Valizy kapila vita amin'ny seramika NSF, afangaro ny rano, 3-hole 4 in. Famolavolana centeret, mora apetraka
Tafidina mitaingina biriky, fametahana lavaka 3 centète sentimetatra
Kodiarana sy havanana
Rano mafana sy rano mangatsiaka no mifehy
Fifehezana ny rano mafana sy mangatsiaka
Ilay nilentika mihitsy no tadiaviko. Nandeha tany amin'ny magazay vitsivitsy ary tsy nahita zavatra tiako. Tena mora ny nametraka azy io, ary niaraka tamin'ny zavatra rehetra ilainao ao anatin'izany ny fantsom-pifandraisana sy ny tatatra. Mora ny manadio, nitazona tsara ny ankizy, tsy afaka mangataka bebe kokoa.
Ity dia faucet mijery tsara izay tonga miaraka amin'ireo ampahany ilainay mihoatra ny nandrasana. Tsy voatery nankany amin'ny magazay izahay mba hividy ny faritra ambanin'ny tototra izay indraindray tsy misy faucet. Ankafizinay koa ny vidin'ity entana ity. Nahatsapa izahay fa nahazo fifampiraharahana tsara.
Nividy an'ity mitady zavatra tsy lafo ity aho. Gaga aho fa toa mavesatra sy avo lenta izany rehefa nosokafako izy. Tsara be izy ireo, ary ho an'ny ampahany amin'ny vidin'ny marika mitarika.
nandany adiny 2 aho vao nametraka ny fantsona fandroana roa fandroana. Ity iray ity dia noforonina tsara lavitra, tsy vitan'ny fametrahana azy fotsiny ao anaty ~ 10 min, fa mino koa aho fa afaka mametaka azy io ao anatin'ny 15 minitra raha ilaina amin'ny ho avy. Tena nanontany tena aho hoe maninona ireo faucet taloha no tsy maintsy noforonina mafy hongotana.
Faly be aho tamin'ity faucet ity. Tanana mavesatra sy malefaka, mikoriana tsara ny rano ary faucet tsara kalitao. Leary aho fa tsy marika mahazatra hitako fa talanjona aho. Tena hividy an'ity marika ity indray.
Fitaovana fandroana fandroana mahatalanjona. Nampidirina ny zava-drehetra mba hahamora ny fametrahana azy. Tiavo ny fijery sy ny fahatsapana ny faucet vaovao!
Ity faucet ity no tena notadiaviko teo am-panomanana ny fanavaozana ny trano fidiovana. Tena tiako be amin'ny fandroana tompoko ka novidiko indray ho an'ny lehibe. Ny malama sy ny lamaody. Miampy ny vidiny mety. Nihoatra ny zavatra nandrasako
Vokatra tena tsara, toa tena tsara ary mora apetraka. Ny fonosana dia tsara, miaro ny vokatra. Tena tiako ny faucet avo lenta mba hahafahanao mahazo mora foana ny tananao ao ambany. Vita tena tsara, vita mafy.
Faucet tena tsara ary koa ny accesories izay niaraka taminy. Ny fantsom-pifandraisana randrana dia tsara, lava (20 ″ miampy) ary adidy mavesatra, ary ny tatatra dia mora azo koa!
Tena faly aho amin'ity fividianana ity, ny faucet dia toa tsara ary mahatsiaro ho matanjaka amin'ny vidiny. Ambonin'izany dia azonao ihany koa ireo tsipika miolakolaka izay manana kalitao matanjaka… .MANDROSO miandry! tsy izay ihany fa mahazo valizy mipoitra mipoitra ihany koa ianao izay mora apetraka, mora ampiasaina ary toa tsara koa. Tsy misy nenina.
*** D E2020-05-13
Tianay ity faucet ity. Tonga feno tamin'ny tatatra sy fittings ho an'ny hookup rano izy io. Tena hanafatra ity vokatra ity tokoa aho
f *** M2020-05-19
Fonosana tsara tarehy sy mora apetraka ity. Izy io dia miaraka amin'ny zavatra ilainao apetraka. Minitra vitsy monja no nametrahana azy dia hita ary mandeha tsara. Hividy hafa aho.
Satria ny spout faucet lavatory misy dia ny manakaiky ny latabatra sy ny rano nantsaka avy tao anaty hady. Novidiko ity sombin-javatra ity. Tsara lavitra noho ny tao amin'ny tobinay ary mety ampiasaina ao an-tranonay. Faly amin'ny fividianana ity.
Vidiny tsara sy mahafinaritra. Mora tantana. Tiavo ny valizy fanosehana. Tsy tonga saina akory ny niaraka taminy.
Ity faucet ity dia niasa tsara ary amin'ny vidiny tsara lavitra noho ny fivarotana rehetra manakaiky ahy. Mora ny nametraka ary tsara tarehy.
H *** ny2020-06-02
Faly nahita an'io tamin'ny vidiny lafo be. Ny kalitao dia mifanentana amin'ny vidiny fa mety tsara ho an'ny trano fidiovana zanakay izany.
*** D E2020-06-02
Raha afaka mandady ao anaty fitoerako aho ary mahatsapa ny hery ao ambadik'ity faucet ity dia ho nataoko izany. Mahatsiaro ho toy ny vita batemy ny tanako isaky ny mahatratra azy ireo ny rano avy amin'ity Andriamanitra ity.
C D ***2020-06-02
Nametraka ny 2 tamin'ireo roa volana lasa izay isika ..
Mahafinaritra ry zareo! Tena kanto izy ireo ary sanda mahafinaritra !!
Nividy andiany telo tamin'ireo fantsona faucet nilentika aho. Azoko natao ny nandany in-droa indroa fa tsy nanana izany tamin'ny teti-bolako. Ireo dia kalitao tena tsara ary tsara tarehy. Nanana mpiorina fantsom-pako matihanina aho ary nolazainy fa izy ireo dia iray amin'ireo andiana tsara indrindra hitany. Tena manoro hevitra.
Nampiasako ireo hanatsarana ny fandroako. Mora ny mametraka sy miasa milamina izy ireo. Tiako ny fahaizan'izy ireo miasa
Faucet fandroana tsara indrindra novidiko! Vidiny mahafinaritra, mora apetraka amin'ny endriny mahafinaritra, miasa tsara!
vokatra tsara. raha mila iray hafa any aoriana dia azo antoka fa hividy iray hafa ary hametraka azy io tsara.
Fantsona fanoloana lehibe ho an'ny trano fidiovana any ambany. Mametraka mora, ary miasa tsy misy fihemorana. Mikasa hividy toy izany koa amin'ny fandroana any ambony any manaraka.
Tsy maintsy nividy zavatra hafa aho hanoloana ny faucet nandroako. Fijery mahafinaritra. Sarany tsara.
A *** ny2020-06-28
Ny kalitao sy ny sandany dia # 1 miaraka amin'ity zavatra ity. Fametrahana mora be ary izay rehetra ilainao amin'ny fametrahana dia ao anaty boaty. Tsy afaka mandresy an'izany ianao na aiza na aiza.
Nividy ny 3 tamin'ireo izahay ho an'ny trano fandroana roa. Tiako ilay mpanakan-drano. Bokotra iray vs visy amin'ny zavatra. Mahatonga azy io ho madio kokoa sy mora ampiasaina kokoa. Amin'ny endriny ankapobeny, endrika marevaka sy mahavariana.
Napetraka ao anatin'ny 30 minitra eo ho eo. Amboary ny efa taloha, ary eritreritra nahafinaritra ny nahatonga ny efitrano fidiantsika ho maoderina kokoa
Tiavo ny fikaingoana sy ny vita amin'ny nikela borosy. Mora apetraka. Manana trano fidiovana telo aho ary manana an'io faucet io ao aminy daholo.
Nividy izany mba hanoloana sy faucet taloha tao amin'ny trano fidiovana ambany indrindra. Tonga niaraka tamin'ny zavatra rehetra ilaiko tamin'ilay asa aho. Mahagaga ahy ny kalitaon'ity faucet ity.
vokatra tena tsara! Gaga aho fa vita tsara ny fanamboarana azy. Hividy iray hafa indray aho ho any amin'ny trano fidiako hafa.
Nanova endrika fandroana tompony roa aho ary tsio-drivotra. Mora apetraka ary tena tsara izy ireo ary noho io vidiny io dia hanovako koa ny trano fidiovana hafa.
Mora apetraka, maoderina ary tsy lafo. Toa mahatalanjona ao amin'ny fandroana atsasako.
Toa lafo ny sanda lehibe ary mahomby. Tena sanda ho an'ny vola dia hatoro anao aho raha mila faucet vaovao na fijerena vao nohavaozina
Nila faucet hifanaraka amin'ny fandroana izahay ary tsy nanana izay tianay ny fivarotana anay. Miasa tonga lafatra ity faucet ity! Mora apetraka ary misy kilasy avo lenta
J *** f2020-07-24
Nividy iray tamin'ireto faucet ireto aho ary tiako be dia nividy roa hafa ho an'ny trano fidiako hafa. Vidy sarobidy izy io ary nanadio ny vatan'ny fandroana ahy! Tonga haingana sy tamina endrika tena tsara ny vokatra. Fantsona mahafinaritra no tena atoroko ity faucet ity!
Marina ny vidiny ary mora ny nametraka azy. Faly be koa aho ny amin'ny fomba fiasa sy ny fahitana azy tsara. Faucet tena tsara ary tsara tarehy. Fametrahana tsotra tsotra